Misintona foana Impostor Apk 2022 ho an'ny Android | APKOLL
Misintona foana Impostor Apk 2022 ho an'ny Android
Moa ve ianao nilalao ny lalao Android mahagaga indrindra teo aminay ary te handresy amin'ny lalao rehetra? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ilay fangatahana ho anao, izay fantatra amin'ny hoe Impactor Apk mandrakariva. Io no kinova farany farany indrindra eto amintsika, izay manolotra ny hacks tsara indrindra amin'ny lalao.
Araka ny fantatrao eo anivonay dia iray amin'ireo lalao multiplayer malaza indrindra Android. Maherin'ny enimpolo tapitrisa ny mpilalao mavitrika amin'ity lalao ity. Noho izany, misy mpilalao marobe, mandany fotoana amin'izany ary mankafy ny fotoana malalaka ananany. Mahafinaritra ny milalao raha toa ianao ka mpilalao mahay ary raha tsy izany dia mahasosotra.
Izy io dia lalao multiplayer, izay azo lalaovina eo anelanelan'ny mpilalao efatra ka hatramin'ny folo. Ny rafitra dia hisafidy automatique mpilalao sasany ho toy ny imposters sy ireo ekipa mpiasa hafa. Ireo mpisandoka dia mila mandray mpiasan'ny ekipa, nefa tsy ho hitan'ny sasany. Noho izany, mazàna ny filalaovana azy dia nahagaga ary koa nahasosotra.
Noho izany, eto amin'ny fomba tsotra isika, amin'ny alàlan'ny alalàn'ny mpilalao dia afaka manana tanana ambony amin'ireo mpilalao hafa. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no afaka mandresy isaky ny lalao? Avy eo mijanona miaraka aminay ary hizara ny momba an'ity fampiharana ity izahay.
Topimaso momba ny Impostor Apk foana
Izy io dia fampiharana hacking Android, izay manolotra ny kinova mod an'ny Among Us. Manome hacks na fitaovana tsara indrindra izy io, izay ahafahan'ny mpampiasa manala mora foana ny mpilalao hafa ho mpisandoka na mahita mpisandoka ho mpikambana ao amin'ny ekipa. Ny endri-javatra rehetra misy an'ity fampiharana ity dia maimaim-poana ary azo antoka ihany koa ny fampiasana.
Amin'ny fampiasana ity kinova mod ity, ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny endri-javatra mihidy rehetra. Misy fananana samihafa azo alaina ao amin'ny magazay, izay tsy maintsy sokafan'ny mpilalao araka ny laharany. Noho izany, miaraka amin'ity fampiharana ity, ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny fananana mihidy rehetra.
Noho izany, andao atomboka amin'ny fanaingoana ny avatar. Ny fanaingoana dia manome fidirana tanteraka amin'ny loko avatar anao. Ny mpampiasa dia afaka manova ny lokon'ny avatar amin'ny fotoana rehetra. Ny satroka rehetra dia mihidy, izay azon'ny mpampiasa ampiasaina arakaraka ny tsirony. Ny hoditra koa dia mihidy ary azo ampiasaina.
Azonao atao mihitsy aza ny mampifanaraka ny rafi-pampisehoanao amin'ity fampiharana ity. Noho izany, misy karazana hacks hafa azo alaina amin'ity fitaovana ity, izay manome fahafahana miditra amin'ny endri-javatra ho an'ny mpampiasa. Tsy maintsy mitady ny sisa amin'ireo endri-javatra azo zahana ianao.
Raha tianao ho fantatra, ahoana no ahafahanao manana tanana ambony amin'ny mpanohitra? Noho izany, ho an'ny hacks, Always Impostor Mod Apk dia manome menu Mod, izay ahafahan'ny hacks rehetra hiditra ao amin'ny lalao. Misy fitaovana an-taonany maro, izay ahafahan'ny mpampiasa mandresy mora foana.
Ny hafainganam-pandeha dia iray amin'ireo endri-javatra manan-danja amin'ity lalao ity satria mahatonga ny avataro mihazakazaka haingana kokoa noho ny hafa. ny Lalao Mod dia manome hacking haingana, izay ahafahan'ny mpampiasa mampitombo ny fihetsiky ny avatar. Amin'ny alàlan'izany dia afaka maka mora foana ny mpilalao hafa izy ireo ary mamonjy ny tenany amin'ny mpisandoka.
Ny halaviran'ny fanilo koa dia zavatra mahasosotra satria voafetra ny halaviran'ny jiro. Noho izany, amin'ny alàlan'ity, ny mpampiasa dia afaka mampitombo ny halaviran'ny fanilo. Raha te-hahalala ireo matoatoa ianao, dia ao amin'ity kinova maodely ity dia azonao atao ihany koa ny mamela ny maody matoatoa, amin'izay ahafahanao mahita matoatoa.
Misy koa hacks an-taonina maro hafa hita ao amin'ity hack ity, izay afaka manamora ny fizotranao. Noho izany, sintomy ny App Impostor foana ary alefaso ireo hacks rehetra misy. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana Impostor foana
Size 127.37 MB
Anaran'ny fonosana com.innersloth.spacemafia
Vohay ny entana rehetra mihidy
Mode Menu dia misy
Ampitomboy ny halaviran'ny hazavan'ny fanilo
Jereo matoatoa sy firesaka amin'izy ireo
Fivoriana maika tsy misy fetra
Tsy misy mpamono olona Cooldown
Manana rindrambaiko mod mitovy aminao izahay.
Fantatrao fa sarotra ny mahita ny dikanteny Mod fa ho anao rehetra, hizara an'ity fampiharana ity aminao izahay. Noho izany, mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Paompy tokana dia ampy hanombohana ny fizotry ny fisintomana.
Mandresy ny lalao rehetra lalaovinao amin'ny Impostor Apk mandrakariva. Mandraisa fanapahan-kevitra marina amin'ny alàlan'ireto hacks ireto na hamono ny ekipazy manontolo. Azonao atao ny mandresy na inona na inona ianao. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary zahao ny tranokalanay bebe kokoa.
Sokajy Games, Action Tags Impostor Apk foana, App Impostor foana, Impostor Mod Apk foana, Lalao Mod Post Fikarohana
Triple A Apk Download ho an'ny Android [Vaovao]